३०% हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको वित्तीय अवस्था :
असार ३०, काठमाडौं । छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएसँगै आउने तयारी भएको हो । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले रू. १०० अंकित दरको ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ को मुनाफाबाट ५ दशमलव २६ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि चुक्तापूँजी रू. २९ करोड ७६ लाख ७५ हजार पुगेको छ । यही पूँजीको आधारमा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद शेयर निष्कासन पछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार पुग्नेछ ।
गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा कम्पनीकोे नाफा १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १ करोड २७ लाख १४ हजार नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ११ लाख ७४ हजारमा सीमित भएको हो ।
गत आवको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा कम्पनीको विद्युत् विक्री आम्दानीमा कमी आएकाले नाफामा कमी आएको हो । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा विद्युत् विक्रीबाट रू. ४ करोड ५७ लाख ३९ हजार आम्दानी गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड ८६ लाख ४० हजारमा सीमित भएको हो । कम्पनीले जगेडामा रू. १ करोड ११ लाख ७४ हजार सञ्चित गरेको छ ।
नाफा घटेसँगै कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि कमी आएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव ७६ रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ४ दशमलव ७८ मा झरेको हो । आइतवार कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४८६ कायम भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । यसदिन कम्पनीको ६३ हजार ७८० कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।